DF oo shaacisay natiijada baaritaanka weerarkii Xabsiga Dhexe | Keydmedia
DF oo shaacisay natiijada baaritaanka weerarkii Xabsiga Dhexe
27 ruux oo Saraakiil, maxaabiis iyo shacab isugu jiro ayaa loo qabtay ku lugla-haashaha weerarkii Xabsiga Dhexe ee Muqdisho.
MUQDISHO, Soomaaliya - Guddigii loo xil saaray baaritaanka shaqaaqadii ka dhex dhacday Xabsiga Dhexe ee Muqdisho ayaa xalayto soo gabagabeyay, iyagoona natiijada baaritaanka ku wareejiyay xeer ilaalinta Qaranka.
Dhacdadaan oo dhacday 10 bishan ayaa loo soo qabtay 27 ruux oo 12 ka mid ah yihiin ciidanka Alsuubta oo ay ku jiraan saraakiil. sidoo kale 6 ruux oo shacab ah iyo 9 maxaabiista xukunneed ka tirsan ayaa ka mid ah dadka loo xiray dhacdadaan.
Guddiga baaritaanka ku howlanaa ayaa sidoo kale sheegay in intii ay baaritaanka wedeen ay soo ogaadeen in August 8,2020 xabsiga dhexe la geliyay hub isugu jiro Bistoolado iyo Bambaanooyin lagu soo dhex qariyay Hilib iyo Jawaan liin ku jirto, taasoo maxaabiista u sahashay in ay dagaalamaan.
Saraakiisha oo loo qabtay arintaan ayaa waxaa ka mid ah taliyihii Xabsiga Dhexe ee Muqdisho iyo ku xigeenkiisa, kuwaas oo lagu eedeeyay fududeynta Weerarkii ka dhacay gudaha Xabsiga Dhexe iyo dayicitaanka amaanka maxaabiista ku xiran xabsiga.
Dad badan ayaa su'aalo ka keenay suurtag-galnimada in hub loo dusiyo gudaha Xabsiga Dhexe oo ka mid ah meelaha sida weyn amaankooda loo adkeeyo, waxaana xusid mudan in weerarka ay ku dhinteen 19 ruux oo afar ka mid ah ahaayeen ciidamadii Asluubta.